Indlela yokufumana uMisa weMelecular of Compound
Indlela Yokufumana iMisa Yesilivere (Ubunzima beMeleki)
Izinyathelo ezilula zokufumana iMisa yeMeleki yeCompound
Ubunzima bemelemitha okanye ubunzima be-molecular bubunzima bebonke. Ilingana nesibalo semimandla ye-athomu nganye ye-athomu nganye kwi-molecule. Kulula ukufumana ubunzima be- molecular ye-compound kunye namanyathelo.
Misela i- molecule ye-molecule.
Sebenzisa ithayimthebhile yexesha ukuze uqinisekise ubunzima be- athomu nganye kwinqumle.
Yandisa inani le - atomic nganye yelungu ngenani lee-athomu zale nxalenye kwi-molecule. Le nombolo imelwe yintlawulo ecaleni kwesalathisi sesalathisi kwifomula ye-molecule .
Yongeza ezi xabiso ndawonye kwi-atom nganye eyahlukileyo kwi-molecule.
Ixabiso liza kuba likhulu le-molecular of the compound.
Umzekelo Wezinto Ezilula Zama-Mass Calculator
Umzekelo, ukufumana ubunzima be-molecule ye-NH 3 , inyathelo lokuqala kukujonga ii-atomic ezininzi ze-nitrogen (N) kunye ne-hydrogen (H).
H = 1.00794
N = 14.0067
Emva koko, ezininzi ezininzi i-athomu ye-athomu nganye ngenani lee-atom kwisiqulatho. Kukho i-atom enye ye-nitrojeni (akukho ncwadana enikwe i-athomu enye). Kukho ama-athomu ama-hydrogen amathathu, njengoko kuboniswe yi-subscript.
ubunzima bemeleleksi = (1 x 14.0067) + (3 x 1.00794)
ubunzima bemeleleksi = 14.0067 + 3.02382
ubunzima bemeleleksi = 17.0305
Qaphela ukuba i-calculator iya kunika impendulo ye-17.03052, kodwa impendulo echaziweyo iqulethe amanani amaninzi ambalwa kuba kukho amadijithi ayi-6 aphezulu kwixabiso le-atomic value used in calculation.
Umzekelo weComplex Mass Mass Calculation
Nantsi umzekelo onzima kakhulu.
Fumana ubuninzi be-molecule (ubunzima be-molecular) ye-Ca 3 (PO 4 ) 2 .
Ukususela kwitheyibhile yenkcazelo, izibalo zee-athomu zento nganye zi:
Ca = 40.078
P = 30.973761
O = 15.9994
Inxalenye ekhohlakeleyo icacisa ukuba zininzi i-athomu nganye ezikhoyo kwiqumrhu. Kukho ezintathu i-athomu ze-calcium, ii-atom ze-phosphorus, kunye nee-athomu ze-oksijini ezisibhozo.
Ufumene njani loo nto? Ukuba inxalenye yenkomfa ikwabazali, phinda i-subscript ngokukhawuleza emva kwesimboli sezinto ngokubhalisa okuvala ii-parentheses.
ubunzima bemeleleksi = (40.078 x 3) + (30.97361 x 2) + (15.9994 x 8)
ubunzima bee molecular = 120.234 + 61.94722 + 127.9952
Ubunzima beelemleksi = 310.17642 (ukusuka kwi-calculator)
ubunzima bemeleleksi = 310.18
Impendulo yokugqibela isebenzisa inani elichanekileyo lamanani abalulekileyo. Kule meko, amadijithi amahlanu (ukusuka kwi-atomic mass for calcium).
Khumbula, ukuba akukho ncwadana enikezelwa emva kwesimboli sento, kuthetha ukuba kukho i-athomu enye.
I-subscription iyasebenza kwisimboli se-atom ilandelayo. Yandisa inani elibhalwe ngumlinganiselo we-athomu.
Bika impendulo yakho usebenzisa inombolo echanekileyo yamanani abalulekileyo. Le nto iya kuba yinani elincinci lamanani amaninzi kwixabiso le-atomic values. Imithetho yoqwalaselo yokujikeleza kunye nokuhamba, okuxhomekeke kwimeko.
Yintoni i-Inelastic Collision kwiFizikiki?
Iingoma zezulu kwiKlasi: Isikhokelo soFundo kubaTitshala
Iyintoni Icebo Elomileyo? - Ukubunjwa, iziganeko, kunye nokusetyenziswa
Yintoni Edala Ubunzima Bobunzima?
Yintoni Eyenzekayo Xa Uthinta Icebo Elomileyo?
Phantse, Kodwa Ungabi Nakho
Ukwakhiwa koBuchule kunye neRhetoric
Iincwadi zeProjekthi zeNgcaciso zeNzululwazi
Iingoma ezi-10 ezinkulu kakhulu zeeDomino zeDomino,
Iinqwelo eziphezulu ezili-10 ezibiweyo zeTyhini ezisetyenzisiweyo
Iyintoni i-Koran malunga neCharity?
IziNgcaciso zeKlasi zeNgcaciso zeSuku loQala lweSikolo
I-Moon yeLore kunye Nentsingiselo kwi-Astrology
Umlando weMerika 1871-1875
AmaKristu eKrismesi Amazwi
Indlela Yokufumana Iingcamango Zokudweba
Uncedo kunye noNcedo
Iingcebiso kunye nezibonelelo ze-Cookie Jar Abaqokeleli
Izicelo zeMaritime zoLwazi lweMveliso kunye neSayensi yeNkcukacha